Njodzi Tourism isiri pamutemo muHolland: Hakuna nzvimbo yakachengeteka zvakare
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba Kwekuchengetedza & Dambudziko » Njodzi Tourism isiri pamutemo muHolland: Hakuna nzvimbo yakachengeteka zvakare
Belgium Kupwanya Nhau • Kuputsa Nhau dzeEurope • Germany Kuputsa Nhau • Netherlands Kuputsa Nhau • nhau • Kuvakazve • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Holland inonyangarika zviri pamutemo kubva kumamepu evashanyi
Mafashama anoparadza evhiki rino muGerman State yeNorthrhine Westphalia yakamutsa imwe gakava rakakura pamusoro pekushanduka kwemamiriro ekunze.
Njodzi iyi inotorwawo mumatunhu akavakidzana neBelgium neHolland.
Njodzi kushanya kuri kuita dambudziko kune vekutanga kupindura.
Vagari muRuwa rweNorth-Rhine Westphalia kuGerman havazombokanganwa zvinotyisa zveChina manheru apo mvura zhinji yakauraya nekuparadza misha yese. Dhamu reGerman rinoramba riri panjodzi yekudonha.
Nzizi dzakaputika mumabhangi uye dzakashambidza zvivakwa muBelgium neGerman, uko vangangoita 160+ vakafa uye 1,300 vakasara vasipo.
Dzimba nemigwagwa muNetherlands zvakazara uye zviuru zvevagari muRoermond neVenlo vakamanikidzwa kubuda mudzimba dzavo.
Mumwe mukadzi ane bhegi repurasitiki rebhuruu muruoko rwake kubva kuna Bad Neuenahr-Ahrweiler akaudza vatori venhau vemuno kuti: "Hatina chasara" apo iye aiyedza kusvika kune pekugara nepijama yake. Mvura yakauya mumaminitsi uye yakasiya nzvimbo yakakura yekuparadza iyo nyika isati yamboona.
Mumwe muverengi akaudza eTurboNews: Pano mu Jerimani, vazhinji vakafa mumafashamo, mazana asipo, zviuru zvakarasikirwa nedzimba. Zvinoparadza. Iyi ndiyo dambudziko remamiriro ekunze riri kuzaruka mune imwe yenzvimbo dzakapfuma kwazvo dzenyika - iyo kwenguva yakareba yaifunga kuti ichave "yakachengeteka". Hakuna nzvimbo "yakachengeteka" zvakare
Migwagwa mizhinji yakaparadzwa, zvifambiso zvevoruzhinji zvakasvika pakamira mira mumaguta mazhinji. Vamwe vagari havakwanise kubuda mumisha yavo
Magetsi uye basa renhare zvinokanganiswa mumataundi nemisha yakanyanya kubatwa.
Vanhu vanonunurwa nemaherikoputa kubva kumatenga edenga nemiti. Madamu ave padhuze nekudonha. Vanodzima moto, mauto eGerman, uye nevamwe vekutanga kupindura vanga vachishanda siku nesikati kuponesa vanhu.
Uye zvakare, vagari vaive vakazvironga kuti vabatsire vamwe. Mazhinji emapoka evagari aya akarongeka uye vava kutamba basa rakakosha mukununura.
Nhepfenyuro dzemuno nemapepanhau zvinopa nhamba dzeakaundi kune avo vanoda kupa mari.
Celine naPhilippe vanobva mumusha mudiki weLeichlingen pakati peDuesseldorf neCologne vachangoroora svondo rapfuura.
Panzvimbo pevhiki rakanyarara pamba kuti vapemberere nguva yavo yekuchata, ivo vava kubatsira vamwe vagari vanoshaya. Nhasi vabatsira mukadzi ane makore makumi mapfumbamwe ekubatirirwa mufurati rake.
Mutungamiri weGerman, VaFrank-Walter Steinmeier vanotarisirwa kushanyira nzvimbo dzakatambura neMugovera. Chancellor weGerman Merkel, uyo achangodzoka kubva kuUnited States achashanyira nzvimbo yenjodzi neSvondo.
Kungoyambuka muganho, mudunhu reDutch reLimburg, njodzi yakaziviswa uye siren dzakanzwikwa pakapaza dhiki.
Chipatara chiri mutaundi reDutch reVenray, kusanganisira varwere mazana maviri, vachaburitswa nekuda kwenjodzi yemafashama.
Mapurisa eDutch muVenlo neRoermond ari kuburitsa faindi kune vashanyi venjodzi. Vazhinji uye vazhinji vashanyi vanobva kune mamwe maguta muNetherlands uye nenyika dzakavakidzana vanga vachityaira kunharaunda yenjodzi kuti vatore mifananidzo nekuiisa pasocial media.
Izvi hazvisi pamutemo muHolland. Inokanganisa zvakanyanya kununura, uye inopinda zvakavanzika zvevanhu veko.